Ngwa kachasị mma ibudata egwu efu na gam akporo | Gam akporosis
Ngwa kacha mma iji budata egwu na gam akporo
Paul Aparicio | | Ngwa gam akporo, Egwu efu
Ọ bụrụ na m laa azụ, ọ na-esiri m ike icheta oge m na-enweghị ekwentị mkpanaaka ma ọ bụ ihe ọkpụkpọ MP3 iji na-ege egwu ebe ọ bụla. Ogologo oge gara aga bụ oge anyị ga-azụta onye ọkpụkpọ dị oke ọnụ iji gee egwu egwu kachasị amasị anyị ma taa, anyị na-ebu ndị egwuregwu a na ngwaọrụ mkpanaka anyị. Ma, olee otú anyị ga-esi ege egwu n’efu? Ma ọ bụ ihe ga-aka mma: olee otu anyị ga-esi budata egwu n'efu na gam akporo?
M ga-ekwu ya otu puku ugboro: ihe ọma banyere mmeghe nke gam akporo bụ na ọ na-enye anyị ohere ịme ihe ọ bụla. Ihe kachasị mma bụ na ụzọ anyị ga-esi mee ihe ndị a, anyị na-enwetakarị ya n'ụdị ngwa nke dị na ụlọ ahịa ngwa ngwa gam akporo, Google Play. N'isiokwu a ma ọ bụ na anyị ga-ekwu maka ọtụtụ n'ime ndị a mmemme ibudata egwu n'efu, yana anyị ga-akụziri gị aghụghọ ndị ọzọ ka ị nwee ike ịnụ ụtọ egwu na ngwaọrụ gam akporo gị na n’ejighị otu euro.
1 Etu esi ege egwu egwu na gam akporo
1.2 Egwú Google Play
1.3 Music YouTube
1.4 Ọ bụrụ na m ga-akwụ ụgwọ maka egwu m?
2 Ngwa kacha mma iji budata egwu efu na gam akporo
2.1 Obere ihe
2.3 Ihe nbudata egwu GTunes
2.4 Ọ bụla Torrent ahịa
3 Etu ibudata egwu MP3 na YouTube
3.2 Site na ihe nchọgharị
Etu esi ege egwu egwu na gam akporo
Spotify bu eze egwu egwu ọ bụkwa maka ihe. Otu n'ime ihe mere nwere ike ịbụ na ọ na-enye a free mode. Ọ bụ eziokwu na o nwere ihe ụfọdụ ọ na-agaghị emeli, ma ọ ka mma mgbe niile. Ma na ya na-akwụ ụgwọ version na na free mode, ị mgbe niile ga-ewere Spotify n'ime akaụntụ.
Google Play Music na-enye anyị ohere nke bulite ihe dị ka egwu 50.000 n’efu na emesia anyị ga-enwe ike mụta nwa na ngwaọrụ ọ bụla. N'ezie, anyị ga-ebugote ya n'onwe anyị; ọ gaghị ekwe anyị ka anyị gee egwu egwu na-aga n’efu n’abụghị nke anyị buliteburu Mana, otu osila dị, ekwesịrị m ikwu na echere m na m nwere ọbá akwụkwọ nke ọhaneze nke ukwuu, echeghị m na m nwere egwu 5.000 na draịvụ ike m, 10.000 na-emesapụ aka nke ukwuu, yabụ Google Play Music na-enye m ohere ịnwe nke m Spotify, ịkpọ ya n'ụzọ ụfọdụ.
Ngwa nke ga-enye anyị ohere igere egwu n’efu bụ Egwu Youtube. Ugboro ole ka anyị chọrọ ịkọrọ egwu otu onye ma ziga njikọ na YouTube? Ọfọn, a pụrụ ịhụ ngwa a dị ka ihe yiri ya, mana anyị ga-abụ onye ga-ege egwu sitere na nyocha anyị mere n'onwe anyị.
Egwu YouTube bụ onye ahịa YouTube nke gọọmentị (sitere na Google n'onwe ya) ezubere maka iji egwu. Dị ka ọrụ vidio, ngwa a bụ n'efu.
Ọ bụrụ na m ga-akwụ ụgwọ maka egwu m?
Nhọrọ ndị ahụ dịka nke gara aga mana, n'ezie, ọ ka mma. Dịka m kwuru na mbụ, ị ga-eburu Spotify n'uche mgbe niile, mana anyị ekwesịghị ichefu Egwu Apple, Apple music gụgharia ọrụ na, ọ bụrụ na anyị yipụ anyị uwe elu, anyị ga-ekweta na ọ nwere nnọọ na-akpali nanị ọdịnaya.
Abụọ Spotify na Apple Music dị ọnụ 9,99 kwa ọnwa, ekọmurua nke nwere ike iyi ka ọ dị elu mana ọ dị anya na nke anyị ndị hụrụ egwu n'anya. Ọ ga-amasị m ime ka o doo anya na m na-ekwu maka nhọrọ abụọ a n'ihi na ha bụ ndị nwere usoro kachasị mma n'etiti katalọgụ, mma na nnweta.
Ngwa kacha mma iji budata egwu efu na gam akporo
Tupu ịmalite, ọ ga-amasị m ikwu ihe ndị a na-emebu n'okwu ndị a: ngwa m ga-enye gị Ha anọghị na Google Play. Nke a pụtara na ha agafebeghị njikwa nchebe ọ bụla ma ọ ga-ekwe omume na ị wụnye ihe emebi. O yighị ka ọ kachasị, mana m na-adọ aka na ntị na onye ọ bụla ga-aza ọrụ ha.
Nke ahụ kwuru, iji nwee ike ịwụnye ngwanrọ site na mpụga Google Play ị ga-aga ntọala nche nke ngwaọrụ gam akporo ma kwe ka ntinye nke ngwa site Amaghi ama. Dị ka m, ngwaọrụ ahụ ga-adọ gị aka ná ntị na ị nwere ihe ize ndụ nke ịwụnye ngwa ngwa. Ugbu a, m ga-agwa gị gbasara ngwa kachasị mma iji budata egwu na gam akporo.
Ikekwe ngwa kachasị ama ga-enyere anyị aka ibudata egwu sitere na ngwaọrụ gam akporo Obere ihe. Si TinyTunes anyị nwere ike ịchọ site tọn songs, ibudata ha na-egwu ha na ihe m ga-asị bụ a Spotify na ọ fọrọ nke nta ọ bụla na-achị. Ihe dị na ya bụ na ọ naghị enye anyị ohere ige egwu tupu ibudata ya, mana ị nweghị ike ịnweta ihe niile, nri?
N'ime ngwa niile maka budata egwu site na ngwaọrụ gam akporo, Echere m na nke kacha mma bụ TinyTunes, ọ bụ maa kwesịrị a na-agbalị.
Download: Obere ihe
Ngwa ọzọ na-enye ohere ibudata songs si gam akporo ọ bụ MusicManiac. Ọ dị m ka ọ bụ ihe na-adịchaghị mma ma rụọ ọrụ karịa nke gara aga, mana ọ bara uru ịnweta ọtụtụ nhọrọ dị na ebe nchekwa MusicManiac anyị nwere ike ịchọta ọtụtụ ọdịnaya. N'ezie, echere m na nhọrọ mbụ ga-abụrịrị ngwa mbụ.
Download: Music - Maniac - MP3 Downloader
Ihe nbudata egwu GTunes
GTunes bụ ngwa ọzọ ama ama, mana enwetụbeghị m mmasị na ya. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụrụ na ọtụtụ ndị ọrụ nwere mmasị na ya, ọ ga-abụ maka ihe na n'ezie na ihe bụ n'ihi na ha hụrụ ihe ha na-achọ. Site na ihe m nwalere, ngwa ahụ na-ewe oge ya iji gosi nsonaazụ ya na abụghị m onye amaara maka inwe ezigbo ndidi, opekata mpe ụdị sọftụwia a.
Download: Ihe nbudata egwu GTunes
Ọ bụla Torrent ahịa
Ọ bụrụ na ihe arụ ọrụ, gịnị kpatara mgbanwe? Iyi iyi Torrent bụ ezigbo ntụkwasị obi ma site na ya anyị nwere ike ịchọta ụdị ọdịnaya niile. Dị ka Google Play adịghị ka ụlọ ahịa ndị ọzọ na-egbochi ngwa ngwa, na ụlọ ahịa gam akporo anyị nwere ndị ahịa nke netwọk Torrent dị ka BitTorrent ma ọ bụ uTorrent. N'iburu n'uche mmegharị ọhụrụ nke nhọrọ nke abụọ, m ga-akwado ịwụnye BitTorrent.
Iji budata ụdị mmiri ọ bụla na ụdị ndị ahịa a, anyị ga-eme nyocha ịntanetị. Enwere ibe weebụ dị ka Kickass Iyi ndị na-elekọta anyị. Ihe niile anyị ga - eme bụ ịbanye otu n’ime weebụsaịtị ndị a, mee nchọta, budata iyi ahụ ma gbaa ya ọsọ, nke ga - emepe ya n’ime ndị ahịa Torrent anyị wee budata na nbudata. Ekwuru m: ọ bụrụ na ihe arụ ọrụ, gịnị kpatara ịgbanwe ya?
Etu ibudata egwu MP3 na YouTube
Nke a bụ ihe bara uru ịnwe dị ka nhọrọ. Dị nnọọ ka e nwere ngwa na-eji YouTube eme ka anyị nwee ike ịnụ egwu, anyị nwekwara ike ibudata egwu ahụ site na ikpo okwu vidiyo nke Google. Enwere ọtụtụ ụzọ budata egwu na youtube, mana aga m akwado abụọ.
Ihe nbudata YouTube maka gam akporo bu ngwa di nma, ya na intaneti, nke gha enyere anyi aka ibudata vidiyo ma obu olu na YouTube. Ọ bụ ezie na enweela ọtụtụ ngwa na Google Play ndị yiri ya (ọ bụghị otu, dị anya na ya), YouTube Downloader Ọ bụghị na ụlọ ọrụ ngwa ngwa gọọmentị, yabụ ị ga-echeta ihe m kwuru n'elu. N'ọnọdụ ọ bụla, agbalịrị m ya ma ọ bara uru ma ọ bụrụ na ịchọrọ ibudata egwu ma ọ bụ vidiyo YouTube na gam akporo na ụzọ kachasị mma. Ọ na-arụ ọrụ n'ụzọ ndị a:
1. Anyị na-emeghe YouTube Downloader ma na-eme nchọta dịka anyị ga-esi site na ngwa ọ bụla.
2. Site na nhọrọ ndị anyị na-ahụ, ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ ibudata ọdịyo nke bụ ihe isiokwu a gbasara, anyị na-ahọrọ MP3 (ma ọ bụ usoro ọdịyo ọ bụla nwere ike igosi anyị).
3. Anyị na-akwado na nbudata na ịme ọpịpị na «Download ebe a».
4. Anyị na-eche ka nbudata na-emecha na ọ bụ ya. Ihe nbudata YouTube na-enyekwa anyị ohere igwu faịlụ ahụ na-ahapụghị ngwa ahụ.
Download: YouTube gbadarar
Site na ihe nchọgharị
Nke a bụ otu ọkacha mmasị m YouTube hacks. Dị ka ị maara, YouTube URL bụ youtube.com, nri? Ọ dị mma, ibudata egwu (ma ọ bụ vidiyo niile) na YouTube site na ihe nchọgharị ọ bụla nke na-enye anyị ohere ibudata faịlụ anyị ga-eme ihe ndị a:
1. Anyị gara YouTube, chọọ vidiyo nke nwere odiyo anyị chọrọ ibudata.
2. URL ga-abụ ihe dịka www.youtube.com/aquíladescriptiondelvideo na URL ahụ anyị ga-eme obere mgbanwe, na-agbakwunye n'ihu youtube.com ụfọdụ nhọrọ ndị a (mgbe na-enweghị akara nkwu):
ka. SS: ọ ga - abụ ihe dịka https://www.ssyoutube.com/watch?v=3rFoGVkZ29w ọ ga - akpọrọ anyị gaa na weebụsaịtị Save From Net Net. Ihe ọjọọ bụ na weebụsaịtị a anaghị enye anyị ohere ibudata ọdịyo na MP3
b. DLV: nke a na-akpọrọ anyị na TubeNinja ma site ebe a anyị nwere ike ibudata egwu na MP3 ma ọ bụrụ na anyị chọrọ.
c. ihe LATAA: peeji a na - enye anyị ohere ibudata egwu na MP3, mana ọ bụ n’asụsụ m na - enweghị ike ịgwa gị ihe ọ bụ. Isi okwu a bụ na ọ na-arụ ọrụ ma na-enye gị ohere ibudata vidiyo na usoro AVI, ihe nke weebụsaịtị ndị ọzọ anaghị ekwe, yana kwa ọdịyo ya na MP3.
3. Ozugbo anyị malitere nbudata, anyị na-eche na, mgbe ọ gwụchara, anyị nwere ike ịkpọ ụda site na ngwa anyị masịrị ma, site na njikwa faili, anyị nwere ike ịchekwa ya ebe ọ bụla anyị chọrọ.
Already marala etu e si eme ya nweta egwu efu site na gam akporo ngwaọrụ? Ma ọ bụrụ na ị maraworị ma mara nke usoro ka mma, egbula oge ịhapụ ahụmịhe na ihe ọmụma gị na nkọwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ngwa kacha mma iji budata egwu na gam akporo
[APK] Chrooma KeyBoard, kiiboodu yiri nke Android, emelitere na 3.0
Twitter enweela bọtịnụ maka Periscope wuru n'ime gam akporo